यसरी लगाउनुहोस् लिपस्टिक, आकर्षक देखिन्छ ! – Jagaran Nepal
०८ मंसिर २०७७, सोमबार
यसरी लगाउनुहोस् लिपस्टिक, आकर्षक देखिन्छ !
Jagaran Nepal सोमबार, भाद्र ०१, २०७७
एजेन्सी । महिलाहरूले आफूलाई आकर्षक देखाउन लिपस्टिक प्रयोग गर्छन् । लिपस्टिक लगाउनु सामान्य विषय मानिन्छ । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ । ध्यान नदिँदा समस्या वा साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ ।
छालाको रङअनुसारको लिपस्टिक छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ । गलत प्रकारको लिपस्टिक प्रयोग गर्दा महिलाको सौन्दर्य बिग्रिन सक्छ । छालाको रगत र रङलाई परीक्षण गरी सोहीअनुसारको लिपस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
महिलाहरूले गोरो छाला छ भने पिच या न्युड पिंक या हल्का बैजनी रङको सेडवाला लिपस्टिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । म्याट लिपस्टिक पनि लगाउन सकिन्छ । आँखामा हल्का मेकअपका साथमा ओठमा गहिरो रङको लिपस्टिकबाट आफूलाई बोल्ड देखाउन सकिन्छ ।
महिलाको छालामा रगत गाढा देखिन्छ भने गहिरो सेड भएको लिपस्टिक छनोट गर्नुपर्छ । रातो, रानी रङको लिपस्टिकको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
लिपस्टिक लगाउँदा अनुहारको ब्राइटनेसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । लिपस्टिक प्रयोग गर्दा हल्का हातले अनुहारमा थोरै बिबी क्रिम र फाउन्डेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ । आँखामा गाजल पनि लगाउँदा महिला सुन्दर देखिन्छन् । ओठसँगै आँखाको मेकअपमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
छालाको रङ न्युट्रल भएको अवस्थामा गहिरो गुलाबी या बैजनी रङको लिपस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ । छालामा सधैँ म्याट लिपस्टिक लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ । गहुँगोरो रङको छाला छ भने सेयर ग्लास या मरुन रङको लिपस्टिक लगाउन सकिन्छ । आँखामा स्मोकी लुक्स भएको मेकअप गर्नुपर्छ । न्युड लिप्सले पनि महिलाको लुक्स एक्स्ट्रा देखाउँछ ।
गोरो रङका महिलालाई क्लासिक न्युड सेड रङले ओठलाई निकै राम्रो देखाउँछ । गोरो छालामा जुनसुकै रङ पनि खुल्छ । न्युड रङ भने सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ ।
गुलाबी रङको सेडवाला लिपस्टिक अधिकांश महिला र पुरुषले रुचाउने गर्छन् । गोरो र मिडियम खालको छालामा हल्का गुलाबी या निओन गुलाबी सेडवाला लिपस्टिक राम्रो हुन्छ । गहुँगोरो रङको महिलालाई भने गहिरो या चम्किलो रङको लिपस्टिकले खुलाउँछ ।
रातो रङको लिपस्टिक प्रायः महिलालाई म्याच गर्छ । महिलाले ब्यागमा सधैँ लिपस्टिक बोक्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्नुपूर्व लिपस्टिक बिग्रन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ब्यागमा लिपस्टिक बोक्ने बानीले सजिलो हुन्छ ।
जाडो याममा यौ:नको चाहना किन बढी हुन्छ ?
के तपाईको पैंताला चिसो भइराख्छ ? राति सुत्नुभन्दा अगाडि यो घरेलु विधि अपनाउनुस्
स्त्रीले बिहान यी काम मिल्छ पूरै परिवारलाई त्यसको फल
सुत्ने कोठामा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी चीज, निम्तिन्छ दुर्भाग्य
खाना खाँदा गर्ने यी गल्तीले पेटमा जम्मा हुन्छ ग्यास, यसले गर्दा पाचन खराब हुन्छ
कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् ? यस्तो छ भविष्यमा हुने रहस्य